Giga Watt စျေး - အွန်လိုင်း WTT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Giga Watt (WTT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Giga Watt (WTT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Giga Watt ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Giga Watt တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Giga Watt များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Giga WattWTT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.059Giga WattWTT သို့ ယူရိုEUR€0.0497Giga WattWTT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0449Giga WattWTT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0537Giga WattWTT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.53Giga WattWTT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.37Giga WattWTT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.31Giga WattWTT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.22Giga WattWTT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0785Giga WattWTT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0816Giga WattWTT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.32Giga WattWTT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.458Giga WattWTT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.316Giga WattWTT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.43Giga WattWTT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.9.96Giga WattWTT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0808Giga WattWTT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0885Giga WattWTT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.84Giga WattWTT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.41Giga WattWTT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.23Giga WattWTT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩69.95Giga WattWTT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦22.46Giga WattWTT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.33Giga WattWTT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.64
Giga WattWTT သို့ BitcoinBTC0.000005 Giga WattWTT သို့ EthereumETH0.000149 Giga WattWTT သို့ LitecoinLTC0.000982 Giga WattWTT သို့ DigitalCashDASH0.000576 Giga WattWTT သို့ MoneroXMR0.000631 Giga WattWTT သို့ NxtNXT4.19 Giga WattWTT သို့ Ethereum ClassicETC0.00821 Giga WattWTT သို့ DogecoinDOGE16.41 Giga WattWTT သို့ ZCashZEC0.000591 Giga WattWTT သို့ BitsharesBTS2.25 Giga WattWTT သို့ DigiByteDGB2.15 Giga WattWTT သို့ RippleXRP0.192 Giga WattWTT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00198 Giga WattWTT သို့ PeerCoinPPC0.204 Giga WattWTT သို့ CraigsCoinCRAIG26.24 Giga WattWTT သို့ BitstakeXBS2.46 Giga WattWTT သို့ PayCoinXPY1.01 Giga WattWTT သို့ ProsperCoinPRC7.23 Giga WattWTT သို့ YbCoinYBC0.00003 Giga WattWTT သို့ DarkKushDANK18.47 Giga WattWTT သို့ GiveCoinGIVE124.65 Giga WattWTT သို့ KoboCoinKOBO12.93 Giga WattWTT သို့ DarkTokenDT0.0544 Giga WattWTT သို့ CETUS CoinCETI166.19
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 18:30:02 +0000.